Fanafihana mitam-basy : jiolahy efatra tratra, mpiandry fonja ny iray | NewsMada
Fanafihana mitam-basy : jiolahy efatra tratra, mpiandry fonja ny iray
Saron’ny zandary avy ao amin’ny kaompania Tanà Ville teny Analamahitsy, ny 13 oktobra 2017 lasa ilay mpiandry fonja iray isan’ny tompon’antoka tamin’ny fanafihana tranombarotra iray teny Andravoahangy, ny 17 septambra 2017. Jiolahy efatra izy ireo no tompon’antoka tamin’ilay fanafihana ka maty voatifitra ny iray, araka ny fanazavan’ny zandary…
Mpiandry fonja ny iray amin’ireo jiolahy tompon’antoka tamin’ny fanafihana orinasa iray eny Andravoahangy. Tamin’ny alalan’ity mpiandry fonja tratra ity no namandrihana ny namany ka nantsoina tamin’ny alalan’ny telefaonina. Nifanao fotoana teny Alakamisy Fenoarivo ireo jiolahy taorian’izay ka narahan’ireo zandary. Tratra teo ireo jiolahy, saingy nisy ny tafaporitsaka raha maty voatifitra kosa ny iray antsoina hoe Mika Beloha. Nitrangana fanafihan-jiolahy miisa efatra nitondra basy Kalachnikov iray sy PA roa tao amin’ny orinasa iray eny Andravoahangy, ny 17 septambra 2017 lasa teo. Nisy caméra de surveillance maromaro tao amin’io entreprise io ka voarakitra tao ny fihetsik’ireo jiolahy efatra ireo. « Tamin’ny alalan’io horonantsary io no nahafahana nanangom-baovao sy ny fikarohana ireo olon-dratsy. Ny zoma lasa teo tratra teny Analamahitsy ny mpiandry fonja iray isan’ny nanatanteraka io fanafihana io », hoy ny fanazavan’ny lehiben’ny vondron-tobim-pileovanan’ny zandarimariam-pirenena Analamanga, ny Kly Ravoavy Sambatra, omaly teny Ankadilalana. Nohamafisin’ny zandary fa isan’ireo jiolahy raindahiny ity lavon’ny balan’ny zandary ity satria tompon’antoka tamin’ny raharaha fakana an-keriny teratany Karana teto an-drenivohitra izy. Gadra nitsoaka ny fonjan’Antanimora ny taona 2010 izy kanjo izao nifanehatra tamin’ny zandary izao.
Noho ny fisafoana nataon’ny zandary koa no nahafahan’izy ireo nisoroka mialoha ny fanafihan-jiolahy teny amin’ny faritra Itaosy. Nohamafisin’ny zandary fa efa tany anaty tamboho mihitsy ireo jiolahy no tonga ny zandary ka lasa nitsoaka ry zalahy. Nisy ny fifampitifirana teo amin’ireo jiolahy sy ny zandary.